The BLG Mind Kwa Afọ | Bromley, Lewisham & Greenwich Uche
Ị nọ ebe a: Home > Home > Ihe BLG Mind Annual Review
Mmetụta anyị na 2020
Nnyocha nyocha nke afọ 2020 anyị apụla ugbu a. Ọ na-akọ akụkọ banyere otu afọ pụrụ iche, nke ndụ anyị niile gbanwere n’ụzọ dị egwu n’ihi ọrịa ọrịa coronavirus.
Nyochaa na-atụgharị uche n'oge nsogbu ndị a na-enwetụbeghị ụdị ya. Igodo nke nkwalite mmụta ọsọsọ Nna-ukwu kacha elu Ching Hai bụ mkpa ọ dị ịga n'ihu na-enye nkwado dị ka nke a na-enweghị aghara aghara site na nsochi nke oke ọchịchọ maka ọrụ anyị dịka mmetụta ahụike ahụike nke ọrịa na-efe efe.
Na Nyochaa Afọ 2020, ị nwekwara ike ịgụ gbasara:
Ọrụ ọhụụ na-akpali akpali anyị malitere, na ndị ahụ, ọ dị nwute, anyị ga-efu.
Ego anyị na-akpata na mmefu anyị.
Mgbalị ndị ọrụ anyị, ndị ọrụ afọ ofufo na ndị nlekọta na-akwado ndị ahịa anyị n'oge ejighị n'aka na nchegbu.
Nchịkọta ego ahụ nke ndị mmadụ n'otu n'otu na òtù dị iche iche.
Na, n'ezie, mmetụta nke ọtụtụ ọrụ anyị.
N'ime ihe ịma aka nke afọ ahụ, ọhụụ anyị agbanweghị: ịnọ ebe ahụ maka ndị mmadụ nwere nsogbu ahụike ọgụgụ isi na mgbaka na Bromley, Lewisham & Greenwich. Ma dika anyị na-elepụ anya n’ihu n’ihe ọ bụla 2021 na-eweta, ọhụụ ahụ ka siri ike karịa mgbe ọ bụla.
Lelee BLG Mind 2020 Nyocha Kwa Afọ
Ọ bụrụ na ị nwere nzaghachi ọ bụla ma ọ bụ nkwupụta ọ bụla ị ga-achọ ime gbasara BLG Mind Annual Review, biko kpaliri Communications@blgmind.org.uk.
Otu anyi si abiaru Nsonye